Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Fifidianana tamin’ny Novambra 2018
Fifidianana · Novambra, 2018
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Novambra, 2018
09 Novambra 2018
Fahombiazana sa tsia ny fifidianana solombavambahoaka nahemotra ela sy nitarina tao Afghanistan?
Mpanoratra Khojasta Sameyee · Azia Afovoany sy Kaokazy
Nandika ny fifanarahana iraisam-pirenena ny fifidianana solombavambahoaka tany Afganistana tamin'ity volana ity, nanitatra ny fifidianana nandritra ny faran'ny herinandro roa.
Myanmar(Birmania) : Nandresy tamin’ny fifidianana ny antoko tohanan’ny miaramila
Nokarakaraina tao Myanmar ny fifidianana voalohany 20 taona taty aoriana ary araka ny efa nampoizina dia ny antokon’ny fiaraha-mientana sy ny firaisankina (USDP) izay notohanan’ny miaramila mpanongam-panjakana no nandresy tamin’ny nahazoany ny 80 isan-jaton’ny toerana tao amin’ny parlemanta. Saingy nilaza ireo mpanohitra fa nisy hosoka ity valim-pifidianana ity.
04 Novambra 2018
Mpanoratra David Sasaki · Fampandrosoana